महन्त गिरीको आठ पानाको सु,साइड नोट भेटियो, यसकारण आफैलाई सि,ध्याएका रहेछन !
अषोज ७, २०७८ बिहिबार 44
अखिल भारतीय अखाडा परिषदका अध्यक्ष तथा निरञ्जनी अखाडाका सचिव महन्त नरेन्द्र गिरीको मृत्यु रहस्यमय बन्दै गएको छ। यसैबीच उनका चेला आनन्द गिरीलाई यूपी प्रहरीले हरिद्वारबाट प्रयागराज ल्याएको छ। उनीसँग प्रहरीले बयान लिइरहेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सोमबार प्रयागराजस्थित बाघम्बरी मठमा नरेन्द्र गिरीको शव शंकास्पद अवस्थामा झुन्डिएको भेटिएको थियो। साथमा सु-साइड नोट पनि फेला परेको थियो, जसमा उनकै शिष्य आनन्द गिरीको नाम पनि उल्लेख छ।
महन्त नरेन्द्र गिरीको आठ पानाको सु-साइड नोट भेटिएको छ। उनले प्रत्येक पृष्ठको तल हस्ताक्षर गरेका छन्। यो लेखिएको छ कि यस महिनाको १३ तारिखमा पनि उनको दिमागमा देह’त्या’ग गर्ने सोच आएको थियो। सु -साईड नोटमा मिति पनि लेखेको छ । यो एक क्रम मा भनिएको छ कि कसरी उनी आनन्द गिरी द्वारा मानसिक रूप बाट परेशान हुन्थे। त्यस पछि अदा प्रसाद तिवारी को भूमिका के थियो? सन्दीप तिवारी को भूमिका के थियो? त्यहाँ उत्तराधिकारी बलबीर पुरी को बारे मा एक उल्लेख छ।
भारतीय पत्रिका दैनिक भास्करलाई प्राप्त सु ‘साइड नो’टमा नरेन्द्र गिरीलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ– एक महिलासँग जोडेर उनको भिडिओ भाइरल बनाइदिने धम्की’ दिइएको थियो। यसैकारण उनले यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो। त्यस पत्रमा आनन्द गिरी, आद्या तिवारी र सन्दीप तिवारीको नाम उल्लेख छ। उनीहरूलाई दे’ह त्या’गका लागि दोषी देखाइएको छ। प्रहरीले यी तीनै जनालाई हिरासतमा लिएको छ।
२० वर्षीया यु’वती रुपा धनगढीमा मृ,त फे’ला’